Iprofayile yekhampani-NANTONG RONGHENG YOBUME BENDALO KWIZIXHOBO, LTD.
ilizwe lamyakudubula I-blower blower ivela kushishino lukaCao. Emva kweminyaka engamashumi amathathu kwimbali yobungcali, kuye kwaduma ekhaya nakumazwe aphesheya ngeemveliso zayo eziphezulu kunye nokunyaniseka nokunyaniseka.
INantong Rongheng Environmental Protection Equipment Co., Ltd.yinkampani yobungcali ebandakanyeka kuphuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yeentlobo ezahlukeneyo zababethayo, iimpompo zokucoca kunye nezinye iimveliso. Iimveliso ezigubungelayo: injongo-jikelele blade iingcambu blower, ukuqhushumba-proof ezintathu blade iingcambu blower, anti-umhlwa ezintathu-blade iingcambu blower, ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu ezintathu-blade iingcambu blower kunye neyunithi, ezintathu-blade iingcambu vacuum pump kunye iyunithi, ifeni ejikelezayo, Izivalo ezahlukeneyo zokhuselo, izixhobo ezingasebenziyo, njl.
I-Rongheng inamandla obuchwephesha, iindlela zoyilo eziphambili, izixhobo zokwenza izinto ezinobunkunkqele, kunye nenkqubo esemgangathweni egqibeleleyo. Ifezekise impumelelo enkulu kubuchwephesha obuninzi beemveliso zayo, kwaye ezona zinto ziphambili ekusebenzeni kwazo njengokusebenza kwamandla kunye nengxolo zifikelele kwinqanaba eliphezulu lehlabathi. Iqela lobuchwephesha lilo eliyila i-HJ / T251-2006 yaseTshayina "Iimfuno zobuchwephesha zoKhuselo lwezeNdalo zeMveliso iRoot Blower" esemgangathweni.
Inkampani yaseRongheng ibambelela kwifilosofi yeshishini esemgangathweni, izinto ezintsha, inkonzo kunye nokuthembeka. Ixhomekeke kwiimveliso zetekhnoloji ephezulu ezinamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Ngomgangatho ogqwesileyo, amaxabiso afanelekileyo, kunye neenkonzo ezinolwazelelelo, iimveliso zayo zithengiswa kulo lonke ilizwe nakwilizwe liphesheya. Ukutshatyalaliswa komlilo, ukudibanisa imichiza, ukuhambisa umoya, ukudubula iziko, i-aquaculture, ukwenza iphepha kunye namanye amasimi anegama eliphezulu kunye nesabelo sentengiso.
URongheng uya kuqhubeka nokubonelela ngeemveliso ezinobuchule ngakumbi kwilizwe lam ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokuzibophelela ngeendlela ezahlukeneyo.